robert mugabe on News24
ARTICLES RELATING TO ROBERT MUGABE
Zimbabwe has applied to rejoin the Commonwealth, the group says, marking a major step in the country's international re-engagement after Robert Mugabe was ousted last year.
Ousted Zimbabwean vice president Emmerson Mnangagwa is in contact with President Robert Mugabe and will return to the country soon, the army chief has said in a televised statement.
Is the alleged military coup what the Southern African country has been waiting for? News24 spoke to ordinary Zimbabweans on the streets of Harare. Watch.
0 comments5728 Views
Two independent Zimbabwean journalists have refused to be turned into state wirtnesses after they reported on a press conference in which a disgruntled ex-ruling party official called on President Robert Mugabe to step down.
Fired lieutenants of Zimbabwe's ex-vice president Joice Mujuru have hit back at their former boss, saying that she cannot sack them from the opposition ZimPF, as they are elders of the party.
Zimbabwe’s President Robert Mugabe is no longer capable of discharging his duties, EFF leader Julius Malema has said.
The youth wing of Zimbabwe's ruling Zanu-PF party has proposed that President Robert Mugabe "should rule for life and with broad powers".
Zimbabwe’s former deputy President Joice Mujuru has called for dialogue among citizens rather than the use of force, a report said on Tuesday.
Zimbabwean nationals living in Johannesburg took to the streets on Tuesday night with wild celebrations, following the news of president Robert Mugabe's resignation. Watch.
0 comments15064 Views
Without lifting a finger of its own, the Trump administration may be witnessing the culmination of nearly two decades of US efforts to prise Zimbabwe from the powerful grasp of its authoritarian President Robert Mugabe
Zimbabwe President Robert Mugabe has signalled a worsening split in his ruling party ahead of elections next year by announcing he’s prepared to fire his deputy, Emmerson Mnangagwa.
'Someone tell Mugabe': Obama's post-presidency pics rile Zimbabweans
Those pictures of Barack Obama enjoying himself on holiday with Richard Branson? Zimbabweans are looking at them and wishing their 92-year-old President Robert Mugabe would take a leaf out of the former US leader's book and hand over power.
Zimbabwean political analysts and opposition parties have reportedly described President Robert Mugabe as "delusional" and "insane", following his utterances over the weekend that the African continent was ready to pull out of the UN if its demands for reform were not met.
Zimbabwe loyalists make significant break with Mugabe for 1st time, calling him dictatorial